onwe-leveling ngwa agha nwe ogbe - Shanghai n'Eziokwu Chem. Co., Ltd
onwe-leveling ngwa agha nwe ogbe
Product Description Self-leveling ogige nna ogbe Ọ na-bụ-eji maka onwe-leveling ogige, a ụdị akọrọ-mbuaha powdery ihe onwunwe nke na-agụnye redispersible polima ntụ ntụ, cellulose ethers na ụfọdụ surfactant na-ewu ụlọ. The ngwaahịa e ọma nwalere site anwale ke ahịa, rite aha ọma site ọrụ. N'ozuzu, anyị otu akpa (25kg) onwe-leveling ogige nna ogbe nwere ike na-emepụta na ...
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 ton / Year
Self-leveling ogige nna ogbe
Ọ na-bụ-eji maka onwe-leveling ogige, a ụdị akọrọ-mbuaha powdery ihe onwunwe nke na-agụnye redispersible polima ntụ ntụ, cellulose ethers na ụfọdụ surfactant na-ewu ụlọ. The ngwaahịa e ọma nwalere site anwale ke ahịa, rite aha ọma site ọrụ.
N'ozuzu, anyị otu akpa (25kg) onwe-leveling ogige nwe ogbe nwere ike mepụta otu ton onwe-leveling ngwa agha.
Ọ dị mfe ime ihe na formular bụ nnọọ ndị ọkà mmụta sayensị.
Packaging na Nchekwa
A. Standard mbukota: Na 25kg akwụkwọ akpa n'ime na Pee akpa
B. Big Bag ma ọ bụ ndị ọzọ pụrụ iche nchịkọta kwere omume na-arịọ arịrịọ.
Echekwa ya na akọrọ ọnọdụ, na nchekwa oge ekwesịghị gafere otu afọ.
The n'elu ụbọchị bụ dị anyị ihe ọmụma, ma na-adịghị ịgbaghara ndị ahịa nlezianya achọpụta ya niile ozugbo na nnata. Iji zere ndị dị iche iche Nwa na dị iche iche ngwaọrụ, biko na-eme ihe ule n'ihu iji ya. Anyị na-doputa ikike ịgbanwe anyị ngwaahịa na-enweghị na-agwa tupu.
Previous: Industrial ọkwa HPMC
Osote: Pharma ọkwa HPMC
Master ogbe China Supplier
ngwa agha Master ogbe
Self-inwetaghachi ogige Master ogbe
Self-inwetaghachi Compoun DS Master ogbe Factroy
Self-inwetaghachi ogige Master ogbe Manufacturer
Self- inwetaghachi ogige Master ogbe Price
Self-inwetaghachi ngwa agha Master ogbe
Self-inwetaghachi ngwa agha Master ogbe Factory
Self-inwetaghachi ngwa agha Master ogbe Manufacturer
Pharma ọkwa ethyl cellulose (EC)
Ụlọ ọrụ ọkwa ethyl cellulose (EC)